7 ဥရောပရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်း
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25/12/2020)
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ရတာဟာ, ခမ်းနား, စိတ် - မှုတ်, ဖော်ပြရန်စကားလုံးအလုံအလောက်မရှိပါ7ဥရောပရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအားကစားကွင်း. ထို့အပြင်, သင်ထင်လျှင်ပင်သူတို့၏ကြီးမြတ်မှုကိုသဘောပေါက်နိုင်သည်, ၀ င်ရောက်မှသာ, မင်းကမှော်သဘောကိုတကယ်နားလည်တယ်ဆိုတာပဲ.
ဒါကြောင့်, သင်တစ် ဦး စိတ်အားထက်သန် Byren မြူးနစ်လျှင်, ဤ7ဘောလုံးအားကစားကွင်းများသည်သင်၏ရေပုံးစာရင်းတွင်သင်၏အာရုံနှင့်ဘုန်းအသရေကိုလုံးဝရထိုက်သည်.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး ဘောလုံး ဂျာမနီရှိအားကစားကွင်း: Dortmund ရှိအချက်ပြ Iduna ပန်းခြံ
Signal Iduna သည်ဥရောပရှိအကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းဖြစ်ပြီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်သည် 80,000 ဖန်သားမျက်နှာပြင်နှင့်မြေအောက်အပူ၏နောက်ကွယ်ရှိစိတ်အားထက်သန်သူများ. ဒါကကြောင့်ဖြစ်သည် 2006 ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း. ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်. ထိုကွောငျ့, မင်းရဲ့ဘောလုံးအားလပ်ရက်တွေကိုဆောင်းရာသီအတွက်အဆင်သင့်စီစဉ်ထားလို့ရတယ်.
Signal Iduna သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းဖြစ်သည် 1965, ယနေ့ဖြစ်သည် Dortmund ဘောလုံးအသင်း၏အိမ်ဖြစ်သည်.
Dortmund ရှိ Iduna ဘောလုံးအားကစားရုံသို့သွားရန်?
သင်အားကစားကွင်းမှတဆင့်ရနိုင်သည် Dortmund မီးရထားလမ်း railစတြီးယားနှင့်ဂျာမနီကိုဆက်သွယ်ထားသောရထားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းများ.
Dortmund ရထားစျေးနှုန်းကို Cologne
မြူးနစ် Dortmund ရထားစျေးနှုန်းများမှ
Dortmund ရထားဈေးနှုန်းသို့ Hanover
Frankfurt မှ Dortmund သို့ရထားစျေးနှုန်းများ
2. Allianz Arena: မြူးနစ်, ဂျာမနီ
မြူးနစ်ရှိဒုတိယအကြီးဆုံးဘောလုံးအားကစားကွင်း, Allianz Arena သည်ဥရောပရှိနောက်ဆုံးဘောလုံးအားကစားကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဂျာမနီရှိ Allianz ဘောလုံးကွင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 2005 နှင့် FC Byren မြူးနစ်ဘောလုံးအသင်းရဲ့မူလနေရာဖြစ်သည်.
သင်ဖြစ်ပျက်လျှင် မြူးနစ်သို့သွားရောက်ခြင်း ဘောလုံးဂိမ်းများအတွက်, သငျသညျအားကစားကွင်းရဲ့ဖောင်းပလပ်စတစ်ပြားများနှင့်အရောင် - ပြောင်းလဲနေတဲ့အပြင်ပန်းအားဖြင့်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်. ဤ2အင်္ဂါရပ်များ Allianz ၏တ ဦး တည်းပါစေ7ဥရောပ၌အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အားကစားကွင်း.
မြူးနစ်မှာရှိတဲ့ Allianz ဘောလုံးကွင်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Frottmaning U-Bahn ဘူတာမှ Allianz အားကစားကွင်းသို့သင်သွားနိုင်သည်, အနီးအနားမှာတည်ရှိသည်.
3. အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်း: Wembley အားကစားကွင်း
ဥရောပရှိဒုတိယအကြီးဆုံးဘောလုံးအားကစားကွင်း, Wembley အားကစားကွင်းအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်ပါတယ် 90,000 ပရိတ်သတ်တွေ. ယူကေတွင်အကြီးမားဆုံးဘောလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် 2009, နှင့်၎င်း၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်သည် 134 မီတာအမြင့် arch, အားကစားကွင်းသရဖူဆောင်း. ထို့ကြောင့်, သင်လိဂ်ဖလားဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အမျိုးသားလိဂ်ကစား -off အတော်လေးတစ်ခုဖြစ်ကြသည် အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံ.
ထိုကွောငျ့, Wembley သည် FA ၏နောက်ဆုံးဖလားပြိုင်ပွဲ၏နေရာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းလန်ဒန်မြို့ရှိဗဟိုမှတ်တိုင်.
လန်ဒန်ရှိ Wembley ဘောလုံးအားကစားရုံသို့သွားရန်?
လန်ဒန်မြေအောက်စက်ဝိုင်းလိုင်းကို Paddington ဘူတာမှ Baker St ဘူတာသို့သယ်ဆောင်ပြီးနောက် London Underground Metropolitan Line သို့ပြောင်းလဲသင့်သည်။ Wembley ပန်းခြံဘူတာ.
4. အီတလီနိုင်ငံရှိအံသြဖွယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်း: မီလန်ရှိ San Siro အားကစားကွင်း
San Siro သည်အီတလီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းဖြစ်သည်. မီလန်ရှိဒီအံ့သြဖွယ်အားကစားကွင်းကိုနှစ်ကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားဆုရှင် Giuseppe Meazza ၏ဂုဏ်ပြုမှုဖြင့်အမည်ပေးခဲ့သည်.
အားကစားကွင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 1926 နှင့်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်သည် 35,000 စိတ်အားထက်သန်ဘောလုံးပရိသတ်များ. သင်အပြင်ဘက်မျက်နှာစာတွင်မလွတ်နိုင်သည့်လက္ခဏာတစ်ခုမှာအနီရောင်အထွက်ပေါ်လာသည့်ခါးပတ်များဖြစ်သည်.
မီလန်ရှိ San Siro ဘောလုံးအားကစားကွင်းသို့မည်သို့သွားရမည်နည်း?
San Siro ဘောလုံးကွင်း5မီလန်ကနေကီလိုမီတာ မြို့လယ်ခေါင်. မီနန်အလယ်ပိုင်းမှ M5 မက်ထရိုလိုင်းဖြင့် San Siro သို့သင်သွားနိုင်သည်.
5. မိုနာကိုတွင်လူးဝစ် II ဘောလုံးအားကစားကွင်း
လူးဝစ် II ဘောလုံးအားကစားကွင်းသည်ဥရောပရှိစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်. အားကစားကွင်းသည်မြေနိမ့်ပိုင်းအဆုံးတွင်အထင်ကြီးလောက်စရာမုတ်သုန် ၉ ခုရှိသည်. အားကစားကွင်းတွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်သည် 16,000 နောက်ခံပြင်သစ် Riviera အတွက်မော်ကွန်းဂိမ်းများအတွက်ပရိသတ်များ.
တွင် 1979 Prince Rainier III သည် Fontvieille ခရိုင်တွင်အားကစားနယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. Parisian ဗိသုကာကြီးတွေကမစ်ရှင်ကိုယူခဲ့ပါတယ်, အရာအတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် 1984, နှင့် Louis II အားကစားကွင်းကိုဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးအားကစားကွင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်.
မိုနာကိုမှာရှိတဲ့ Louis II ဘောလုံးအားကစားနည်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
လူးဝစ် II ဘောလုံးကွင်း 10 နာရီကွာလန်ဒန်ကနေရထားဖြင့်.
6. Groupama အားကစားကွင်း, လိုင်ယွန်
ငါတို့အပေါ်မှာဒီအံ့မခန်းအားကစားကွင်း7ဥရောပရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအားကစားကွင်း, အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်သည် 60,000 ပရိတ်သတ်တွေ. ဖြည့်စွက်ကာ, ၎င်းသည်ပြင်သစ်ဘောလုံးအသင်းအိုလံပစ် Lyonnais ၏အိမ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ဘောလုံးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည် 2024 ပဲရစ်ရှိနွေရာသီအိုလံပစ်အားကစား.
ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည်အိုလံပစ်အားကစားပွဲအတွက်ပါရီသို့သွားရန်စီစဉ်လျှင်, သငျသညျကျိန်းသေဒီအကြီးဘောလုံးအားကစားကွင်းသို့သွားရောက်သင့်ပါတယ်.
လိုင်ယွန်ရှိ Groupama အားကစားကွင်းသို့သွားရန်?
သင်လုပ်နိုင်သည် ဘူတာရုံမှ Groupama အားကစားကွင်းသို့သွားပါ 3. ဒါဟာအားကစားကွင်းမှစူပါအနီးကပ်ပါပဲ – ရုံ 10 မိနစ်များ’ လမ်းလျှောက်.
7. Marseille ခုနှစ်တွင် Velodrome အားကစားကွင်း
မာဆေးလ်ရှိအံ့ဖွယ်ကောင်းသောအားကစားကွင်းသည်နောက်ကျောရှိပရိသတ်များအတွက်တံခါးများကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည် 1937. ထိုကတည်းက, Velodrome အားကစားကွင်းကြိုဆိုသည် 67,000 ပရိတ်သတ်တွေပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ဘောလုံးရာသီတိုင်း. အားကစားကွင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သတိထားရမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာဖန်ခတ်ထားသောခေါင်မိုးဖြစ်သည်, အရာလက်လွတ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်.
သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် Velodrome အားကစားကွင်းဟာဘောလုံးကွင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, က Multi- ရည်ရွယ်ချက်အားကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်, စက်ဘီးလမ်းကြောင်းနှင့်အတူ. ယနေ့တွင်, ၎င်းသည် Olympique de Marseille ကလပ်အသင်း၏အိမ်ဖြစ်သည်.
Marseille ရှိ Velodrome အားကစားကွင်းသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
အဆိုပါ Velodrome အားကစားကွင်းအကြောင်းကိုပါ 3.5 မာဆေးမြို့လယ်မှကီလိုမီတာ. ထိုကွောငျ့, သင်ကမက်ထရိုလိုင်းနှင့်အားကစားကွင်းကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 2. သင်ကပင်ထံမှမက်ထရိုဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ် ဘူတာရုံ သငျသညျလျှင် ဥရောပတလွှားခရီးသွားလာ ရထားနဲ့.
အကယ်၍ သင်သည်စိတ်အားထက်သန်သောဘောလုံးနှင့်အားကစားပရိသတ်များဖြစ်လျှင်ဘောလုံးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခြင်းသည်ဥရောပ၌ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဒီအထဲမှမည်သည့်အတွက်မဆိုဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်7ဥရောပရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအားကစားကွင်း.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်း ၇ ခု” ကိုသင်၏ဆိုက်တွင်ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famazing-football-stadiums-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဘောလုံး #ဘောလုံးကစား Bestfootballstadiumseurope ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ FIFAworldcup ဘောလုံးသမား ဘောလုံးကွင်း ဘောလုံးကွင်း